Ngwakọta Semalt na-atụ aro 5 Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ
Ihe ntinye ihe oyiyi ahụ na-enye aka ịmepụta ndepụta nke ihe oyiyi achọtara na weebụsaịtị. Ị nwere ike iji ngwá ọrụ a wepụ foto ma bupu ha na usoro JSON. Ngwá ọrụ a nwere interface enyi-enyi ma dị mfe. Naanị ị ga - abanye URL nke mkpokọta ịchọrọ nyochaa ma kụọ bọtịnụ "Nyefee". Ihe oyiyi mmepụta ihe ngwa ngwa weghachite ọdịnaya ma nweta ihe ị chọrọ - kilo aldiran gainer. A na-akpọ ụfọdụ n'ime nsụgharị ndị ọhụrụ ya n'okpuru ebe a.
ExtractPDF na-enyere aka wepu PDF akwụkwọ ma mebie ha n'ime ngalaba: ihe oyiyi, ederede, ederede, na metadata. Ị nwere ike iwepụ ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ dị ka ịchọrọ n'amaghị mma. Naanị ị ga - etinye URL ahụ wee hapụ ExtraPDF nyochaa data ya
Konwerter bụ onye ọzọ na-ese ihe oyiyi nke na-ese ihe oyiyi gị na akwụkwọ ederede dị mfe. Ngwaọrụ a dị mma maka ụlọ ọrụ na ndị ọchụnta ego. Ị nwere ike wepu faịlụ BMP, GIF, JPG na PNG n'iji ngwaọrụ a. Naanị ị ghaghị ịkọwa data ma pịa bọtịnụ "Wepụ" ka ịmalite ịcha. Mgbe a na-eji ihe nkedo eme ihe, ị nwere ike ibudata data na usoro a chọrọ.
SmallPDF bụ ụdị ọzọ nke ihe ntinye ihe oyiyi. Ọ nwere interface enyi-enyi ma nwee ike iwepụ ọtụtụ ihe oyiyi dịka ịchọrọ. SmallPDF ọ bụghị naanị na-edepụta faịlụ JPG na PNG kama ọ na-ewepụtakwa data site na PDF akwụkwọ. Ị nwere ike ịnweta data na usoro a pụrụ ịdabere na ya ma nwee ike ịmekwu ndị ọzọ na ịntanetị. Mgbe ịtinyere URL ma ọ bụ bulite ihe oyiyi, ị ga-ahụ bọtịnụ "Nchapu" ma hapụ ka ngwá ọrụ a rụọ ọrụ ya.
PDF Online bụ otu n'ime nsụgharị kachasị mma nke ihe ntinye ihe oyiyi. Ọ na-enweta gị foto ndị dị elu ma na-ewepụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ibe weebụ dị mfe. Nanị ihe nzaghachi bụ na ngwá ọrụ a nwere ike ibelata ihe oyiyi atọ n'otu oge. Nke a pụtara na ịnweghị ike iji ya maka nnukwu ọrụ ma nwee ike ịzụta ụdị nke ya. PDF Online adịghị mkpa ka ebudata ya ma nwee ike ijikwa ihe arụmọrụ data gị. Ọ bụ usoro zuru ezu na nke a pụrụ ịdabere na ya, nke kwesịrị ekwesị maka azụmahịa, ndị mmemme, ndị coders, ndị ọkachamara IT na ndị webmasters.
PDFMate bụ ihe ọzọ dị egwu nke nsụgharị ihe oyiyi. Ọ dị ugbu a maka ndị ọrụ Windows naanị ma mara amara ya maka interface enyi ya. Site na PDFMate, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ihe oyiyi ma ọ bụ PDF faịlụ dịka ịchọrọ. Ngwá ọrụ a na-ewepụ data sitere na ibe odo, akwụkwọ ọcha, mkparịta ụka na ntụziaka online. Ọ na-ehichapụ ma PNG na JPG faịlụ ma bụrụ ngwanrọ a tụkwasịrị obi.
Maka njikarịcha search engine kachasị mma, ihe oyiyi niile ga-emepụta àgwà ALT. Àgwà ndị ahụ na-agwa Google gbasara foto gị ma nye ya echiche nke ụdị ụdị ọdịnaya ị na-ebipụta. Ụdị nsụgharị nke ihe oyiyi nke nbudata ngwa ngwa bụ ma ndị a pụrụ ịdabere na ha. Ha na-enye anyị nchọta rịọrọ ma ọ dịghị mkpa koodu ọ bụla. Ị nwere ike irite uru site na ngwa ntinye ihe oyiyi a dị ka onye na-abụghị onye mmemme.